4 amafilimu ngezinhlekelele zemvelo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba besho, okungokoqobo njalo kudlula inganekwane. Emkhakheni wezamabhayisikobho, kunamafilimu amaningi akhulume ngendaba ye- izinhlekelele zemvelo nangezimo zezulu.
Luhlobo lwe-cinema umphakathi ovame ukuluthanda kakhulu ngenxa yalo ezithombeni ezibabazekayo yize njengoba ngishilo ngaphambili, iqiniso livame kakhulu okuhlaba umxhwele kakhulu nokulimazayo.
Le yi-movie lapho isiphepho esihlaba umxhwele isizobhubhisa sonke isimo sase-Oklahoma. Indima yabaxoshi besiphepho Kubalulekile kwifilimu ngoba bazobe bephethe ukugwema inhlekelele enjalo. Ifilimu ibuyisela kabusha ngokuphelele incithakalo namandla yezinkanyamba ezishiwoyo, okwenza umbukeli azizwe enemizwa eminingi.
Kuyinto a I-movie ye-apocalyptic elandisa ukuthi isiphepho esihlaba umxhwele sihlasela kanjani umhlaba wonke enkathini entsha yeqhwa. Ngaphandle kokuba yi-movie, abaningi bakholelwa ukuthi kwesinye isikhathi lokhu kuzophela ngenxa imiphumela emibi yokuguquka kwesimo sezulu kuwo wonke umhlaba.
Le filimu izama ukusondelana neqiniso ngoba isuselwa ku Ukuqagela kwekhalenda leMayan. Kulezi zibikezelo kwathiwa ngo-2012 umhlaba wonke uzohlupheka uchungechunge lwezinhlekelele zemvelo lokho kungadala ukubhujiswa kwalo. Yize lezi zibikezelo zingazange zigcwaliseke ngenjabulo, imibiko yakamuva yesimo sezulu ikhombisa ukwanda kwe Izimo zezulu ngenxa yokushisa komhlaba okwenzeka emhlabeni manje.
Kulesi senzakalo, izinganekwane zisiphoqa ukuba sicabange ukuthi kanjani kuqhuma intaba-mlilo ngaphakathi kwedolobha laseLos Angeles. Uzokwazi ukubona imiphumela ebulalayo yalokho kuqhuma bese ucabanga ukuthi kuzokwenzekani uma kwenzeka lokho zenzeka empeleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ama-movie we-4 ngezinhlekelele zemvelo